बौद्धिक विकास, फेंग शुई
कार्यालय कार्यकर्ता काममा खर्च धेरै घरमा भन्दा आफ्नो समय बढी छ। तालिका मा कुराको फर्नीचर व्यवस्था, प्रकाश को राशि, नियुक्ति - यो हरेक सानो कुरा अध्ययन गर्न त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। सबै फेंग शुई को नियम अनुसार गरेको छ भने, कार्यस्थल दक्षता वृद्धि हुनेछ, र मुड पूर्णतया योगदान हुनेछ। कार्यालय कर्मचारी खुशी साथ आउनेछ, काम सन्तुष्टि प्रदान गर्नेछ, र मामला सजिलै र ढिलाइ बिना हल गरिनेछ।
फेंग शुई कार्यस्थल मा - यस बारे एक सम्पूर्ण विज्ञान छ स्पेस संगठन कार्यालय मा। यो प्रदान गर्नेछ क्यारियर विकास, सहकर्मीसँग अनुकूल सम्बन्ध, साथै षड्यन्त्र को कमी र कुराकानी काम। कसरी यो सबै काम गर्न सक्छन्?
ढोका नजिकै तपाईंको डेस्क राख्न छैन। यो ठाउँ सुरक्षित छ किनभने: - बाहिर सबै नकारात्मक सजिलै खुल्ने, र सकारात्मक मार्फत आउँछ। त्यसैले, कुनै पनि बहाने - "असहज" "मार्फत", "काम गर्न सक्दैन" - तालिका को स्थान परिवर्तन गर्न आवश्यकता को आफ्नो नेताहरूले विश्वस्त गर्न। तपाईं फिर्ता ढोका गर्न बस्न भने एउटै गर्नुपर्छ - त्यसैले कार्यालयमा फेंग शुई को नियम हुक्म।
ठूलो खुला Windows पनि ऊर्जा हुनेछ टाढा र काम ध्यान बाधा। नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, यो एक फूल संग एक ठूलो पट को खिडकी धारण वा खिडकी अंधा मा झुन्डियो आवश्यक छ। तपाईं पालना भने कार्यस्थल मा फेंग शुई यी नियमहरू थप सहज र सुरक्षित हुनेछ।
भविष्यको लागि काम गर्ने र नयाँ विचार तपाईं पर्खाल मा खण्डमा लाग्छ भन्ने तथ्यलाई कारण हुन सक्छन् गर्न नसक्नुको। तपाईं आफ्नो डेस्क को स्थिति ठीक गर्न सक्नुहुन्न भने, एक क्षेत्र वा समुद्र को एक ठूलो चित्रकला अगाडि अड्किनुहोस्।
यो अत्यन्तै प्रतिकूल हुन मानिन्छ, र तपाईं, एक सहकर्मी संग सामना गर्न अनुहार बसिरहेका तपाईं धेरै राम्रो सर्तहरू मा उहाँलाई (उनको) हुनुहुन्छ भने पनि हुन्छ। यो समस्या को समाधान ग्लास पर्खालहरु वा क्रमवय डेस्कटप को निर्माण हुनेछ।
प्रकाश, फेंग शुई अनुसार, काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो भन्दा प्राकृतिक हुनेछ यदि यो धेरै राम्रो हुनुपर्छ। यदि प्रकाश कम छ, त्यसपछि सेट गर्न निश्चित छ तालिका दीपक, directionally तालिका उजाला हुनेछ जुन। यो निष्क्रिय हात को भाग मा स्थित गर्नुपर्छ।
को डेस्क मा कागजात को बवासीर कागजात मा भद्रगोल राम्रो काम गर्न योगदान असम्भाव्य छन्। सबै ठाउँमा र निरपेक्ष क्रममा हुँदा फेंग शुई, प्रेम। रचनात्मक - हरेक बिहान त्यसपछि ताजा हुन लाग्यो तालिका मा एक कागज र आफ्नो वितरण, र विचार संग शुरू हुन्छ। साथै, कार्यालय अव्यवस्था इन्डोर हावा degrades र नकारात्मक ऊर्जा condenses।
कार्यालय मानिसहरूको संख्या पनि समग्र वातावरण असर गर्नेछ। यसलाई आफ्नो तालिका कर्मचारीहरु को एक भीड मार्फत squeeze गर्न आवश्यक हुनेछ भने एक कर्मचारी सहज महसुस भनेर, र फिर्ता यसलाई सहयोगी सास फेर्न हुनेछ असम्भाव्य छ। तसर्थ, ठाउँ र ताजा हावा - यी असल स्वास्थ्य आधारभूत नियमहरू केही छन्।
र यो तपाईं आफ्नो काम मन छैन भने, तपाईंले सायद फेंग शुई Basics को मद्दतले यसलाई ठीक भन्ने बुझे गर्नुपर्छ। यसलाई लायक छ हुनत सबै प्रयास गर्न। फेंग शुई Basics कार्यस्थल मा प्रयोग र परिणाम पालन।
फेंग शुई कार्यस्थल को बनाउने
फेंग शुई मुद्रा को लागि: आकर्षित र कसरी भण्डारण गर्न कसरी
धन आकर्षित एक माध्यम रूपमा फेंग शुई फूल
"लिइयो" फिलिम: अभिनेता र भूमिकाको, वर्णन र समीक्षा
Boksmod: यो के हो, कसरी प्रयोग गर्ने?
Sharm एल शेख4तारा होटल। Sharm el शेख बिदा, होटल, मूल्यहरू
डिस्पोजेबल gynecologic दर्पण, आफ्नो आकार र आवेदन
नवजात हेरविचार: अस्पताल र घरमा swaddle कसरी